काठमाडौँ जिल्ला सभापतिमा उम्मेदवारीमा उपेन्द्र कार्की नै किन? | शुभयुग
काठमाडौँ जिल्ला सभापतिमा उम्मेदवारीमा उपेन्द्र कार्की नै किन?
प्रकाशित मिति: २०७८ मंसिर १०, शुक्रबार (७ महिना अघि)
काठमाडाैँ – नेपाली कांग्रेस काठमाडौंको निर्वाचन १२ गते आइतबार हुँदैछ । शनिबार उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ । सभापतिम वर्तमान सभापति सबुज बानियाँ र २ नम्बर क्षेत्रका सभापति उपेन्द्र कार्कीबीच प्रतिष्पर्धा हुँदैछ ।